निर्मला हत्या प्रकरण, शालीकरामको आत्महत्या र रवि लामिछाने
शिलापत्र संवाददाता काठमाडाैं, २४ साउन
निर्मला हत्या प्रकरणमा गरेको एउटा बहस र पत्रकार शालीकराम पुडासैनीको ‘आत्महत्या’लाई लिएर न्युज २४ टेलिभिजनको कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगका प्रस्तोता रवि लामिछाने फेरि विवादमा तानिएका छन् ।
केही समय अघिसम्म रविसँगै काम गरेका पत्रकार शालीकराम पुडासैनी मंगलबार राति चितवनको एउटा होटलको कोठामा झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परे । उनको मृत्युलाई कतिपयले ‘रहस्यमय’ भनिरहेका छन् । पुडासैनीले काम गरिरहेको माउन्टेन टेलिभिजनले विज्ञप्ति निकालेर पुडासैनीको मृत्युबारे गम्भीर ढंगले अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रशासनसँग माग गरेको छ ।
त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् बुधबार अनलाइन पत्रिका दैनिकीडटकममा समाचार आयो, ‘रवि लामिछानेका कारण पत्रकार शालिकराम पुडासैनीले आत्महत्या गरेको खुलासा, अडियो भेट्टियो ।’
बुधबार दिउँसो शालीकरामको मलामी गएर आएलगत्तै रविले फेसबुक लाइभ गरेर भने, ‘शालीकराम भाईको मृत्युलाई लिएर केही अनलाइनले मलाई जोडेछन् । म तथ्य र प्रमाणमा विश्वास गर्छु, शालीकराम भाईको शरीर अहिले धुवाँ बनेर उडिरहेको छ । म उसैको मलामी गएर आउँदैछु । मैले केही कुरा स्पष्ट गर्नैपर्ने भएकाले आएको छु । मैले कुनै दबाब दिएको भए इमेल, फेसबुक, फोन रेकर्ड देखाउन वा सुनाउनका लागि म तयार छु । सोधबुझ गर्न प्रहरीले बोलाए म जानेछु ।’
यसरी लाइभ गरेको अघिल्लो दिन उनले ‘सिधा कुरा जनतासँग’मा निर्मला हत्या प्रकरणबारे लामो बहस गरेका थिए जहाँ कञ्चनपुरका पत्रकार खेम भण्डारी र निर्मला बलात्कार र हत्या प्रकरण छानबिनमा दोषी मानिएर निलम्बनमा परेका डिएसपी अंगुर जिसी थिए ।
पत्रकार खेम भण्डारी आफूलाई निर्मलालाई न्याय दिलाउन चलाइएको अभियानका अभियान्ता मान्छन् । हुन पनि सुदूरपश्चिममा उनका समर्थक थुप्रै देखिन्छन् ।
एकातिर, रविले कार्यक्रममा खेम भण्डारीलाई झुक्याएर अंगुर जिसीलाई बोलाएका थिए । अर्कोतिर, केही तथ्य अगाडि राखेर निर्मलाका दोषी ‘दीलिपसिंह विष्ट’ नै हुन् भन्ने मतमा रविले जोड गरिरहेका थिए ।
कार्यक्रम चलिरहेको थियो । अंगुर जिसी आएर अर्को पोर्डियममा उभिए । लगत्तै पत्रकार भण्डारीले रविले आफूलाई झुक्याएको भनेर आपत्ति जनाए । रविले आफूले ‘इथिक्स’ नकुल्चिएको भन्दै सम्झाउन खोजे । बहस यसरी बहकियो र अन्ततः चुरो कुरो हुनै नपाइ कार्यक्रम सकियो ।
यसपछि सुदूरपश्चिममा रविबारे अनेक टिकाटिप्पणी हुन थाल्यो । पत्रकार भण्डारीका समर्थकले रविलाई गाली गरेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्न थाले । केही समय अघिसम्म आफूलाई रविको समर्थक बताउनेहरु पनि ‘रविलाई बल्ल चिनेको’ भन्दै लेख्न थाले ।
रविसँग रिसाएकाहरुले पत्रकार शालीकरामको आत्महत्या र रविसँग जोडिएर आएको त्यही समाचारको स्क्रीन सट राखेर रविमाथि थुप्रै प्रश्न तेर्स्याएका छन् ।
अब रविबारे आएका टिकाटिप्पणीलाई उनका समर्थकले प्रतिवाद नगर्ने कुरै भएन । एकथरी मान्छे छन् जो रविलाई भगवान मान्छन् । रविले गल्ती नै गरे पनि पत्याउन चाहँदैनन् । ‘श्रीमतीकाण्ड’लाई र ‘पासपोर्ट प्रकरण’लाई लिएर रविको आलोचना गर्नेलाई ज्यान मार्ने धम्की दिनेसम्मका समर्थक छन् उनका । प्रायजसो वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा रहेका र राज्यसत्ताको पहुँचभन्दा मुनि रहेकाहरु रविका ‘अन्धभक्त’ रहेको ठानिन्छ ।
बुधबार रातिको कार्यक्रम चित्त नबुझाएका कञ्चनपुरका पत्रकारहरुले पनि शालीकरामको मृत्युसँग जोडेर रविको आलोचना गरे ।
कञ्चनपुरका पत्रकार पुष्कर भट्टले बिहीबार अर्का पत्रकार होम योगीको एउटा स्टाटस कपी गरेर आफ्नो वालमा राखे । त्यहाँ लेखिएको छ, ‘नबुझेको कुरा ! प्रहरीले माउन्टेन टेलिभिजनका पत्रकार शालीकराम पुडासैनीको हत्या वा आत्महत्याबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ । केही अनलाइन मिडियामा सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमका प्रस्तोता रवि लामिछानेलाई इंगित गरी समाचार आउने बित्तिकै रविले फेसबुक लाइभमा आएर म त होइन है भन्दै चोखिन खोज्नु भनेको झन् शंकाको घेरामा पर्नु होइन् र ? आरोप पुष्टि नहुँदै स्पष्टीकरण दिनुले के संकेत गर्छ ? जनता जान्न चाहन्छन ।’
यति कडा स्टाटस राखिसकेपछि कमेन्ट बक्समा रविका समर्थकको प्रवेश नहुने कुरै भएन । पत्रकार भट्टमाथि अनेक गाली गलौज सुरु भयो । उनलाई माउन्टेन टेलिभिजनको जागिरबाट निकाल्नेसम्मका धम्की आएका छन् ।
एउटा नमुना हेरौं,
निर्मला हत्या प्रकरणमा रविले ‘एकपक्षीय’ ढंगले प्रस्तुति दिए भन्नेहरुको मत बलियो छ । खेम भण्डारीले पठाएका डकुमेन्ट्स उनले अंगुर जिसीलाई फरवार्ड गरेको विषय पनि आलोच्य छ । भण्डारीले पठाएको डकुमेन्ट्स अंगुर जिसीलाई पठाएर राति कायक्रममा अंगुर जिसीलाई नै बोलाउनु र निर्मला पन्तका दोषी दीलिपसिंह विष्ट नै हुन् भन्ने पक्षमा भण्डारीलाई ल्याउन खोज्न रविको कमजोरी भएकाे कतिपय सञ्चारकर्मी बताउँछन् । किनकि, दीलिपसिंह नै दोषी हुन् भने पनि यो कुरा उनले भन्ने होइन न्यायाधीशले भन्ने हो । त्यसैले पनि सुदूरपश्चिममा उनको आलोचना भएको हो । तर, आलोचना अग्लिँदै जाँदा उनलाई शालीकरामको आत्महत्या र यसको कारणसँग जोडियो । शालीकरामको आत्महत्या र यसको कारणबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसमा कोही कसैलाई जोडेर आलोचना गर्नु शोभनीय हुँदैन ।
समाचारमा आएजस्तै शालीकरामले भिडियो सन्देश छाडेर गएको र त्यसमा रविलाई आत्महत्याको कारण मानिएको भए प्रहरीले कानुनअनुसार कार्बाही गर्ला । रविले पनि आफू दोषी ठहर भए जेल जान तयार रहेको बताइसकेका छन् । तर, निर्मला प्रकरणको बहस भने विवादित नै हो । त्यसमा रविका कमजोरी पनि देखिन्छन् ।
यसअघि नेपालमा अवैधानिक रुपमा काम गरेको तथा आफ्नी पूर्वपत्नीको विषयमा रवि विवादित बनेका थिए ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २५, २०७६, ०५:१४:००